Fitrandrahana ao Soamahamanina : mitohy ny fandraràna napetraky ny fanjakana | NewsMada
Fitrandrahana ao Soamahamanina : mitohy ny fandraràna napetraky ny fanjakana
Ny 19 jolay lasa teo nandran’ny fanjakana ny fitrandrahana nataon’ny Sinoa any Soamahamanina ary mbola tsy niverina tamin’ny fanapahan-keviny izy ireo. Nilaza araka izany, ny tale teknika ao amin’ity orinasa mpitrandraka ity, Danny Rasolomanana, fa nitsahatra ihany koa ny asan’izy ireo nanomboka teo, fa tsy araka ny filazan’ny olona momba azy ireo. Maro ireo olona manambara ao Soamahamanina mantsy fa mbola mitohy ny fitrandrahana ataon’ity orinasa ity rehefa amin’ny alina.
Fantatra fa ny fanjakana efa ao anatin’ny fandinihana ny famahana ity olana ity, ary mijery ny fomba rehetra tsy hisian’ny korontana sy olana eo amin’ireo mponina. Efa nilatsaka tany an-toerana ny tompon’andraiki-panjakana nijery ifotony sy naka hevitra tamin’ireo olona any an-toerana, izay voalaza fa tsy nanavahana na momba io fitrandrahana io na tsy momba ihany koa. « Hisy ny fikarakarana varavarana misokatra tsy ho ela hitondrana fanazavana momba ity raharaha ity », hoy ny fanazavana.
Hatreto aloha, nitsahatra ny hetsiky ny mponina ao Soamahamanina, saingy mandeha ihany ny tolona amin’ny fanakanana ny fitrandrahana ataon’ireo Sinoa sy ny fikasana hanala azy ireo, ataon’ireo mpitarika. Milaza fa efa nisy ny dingana nataon’ireo tamin’izany. Asa na hisy kosa anefa ny fifanatonan’ireo olona ireo sy ny tompon’andrakitry ny orinasa ary ny fanjakana.